जापान र दुई चियाको कथा | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापान र दुई चियाको कथा
म यो लेख लेख्दा टोकियो स्टेसन माथीको फ़ुकुजुएन टि हाउसमा दुई महिला चिया बनाईरहेको हेर्दै छु। एउटी महिला किमोनोमा हुनु हुन्छा र अर्की महिला वेस्टर्न स्टाईल्को लुगामा सजिएको हुनु हुन्छ। चिया फ्रेश छ। उनीहरु आफ्नो काम निकै मनपराउछन। उनीहरुको यहि लगनशीलताले यो चियामा छुट्टै स्वाद हुन्छ। यो चिया नेपालको जस्तो ब्ल्याक टि नभएर ग्रिन टि हो। यो दुई चियाको कथा दुई स्टाईल, दुई स्वाद र दुई सहरबाट सुरु हुन्छ।
जापानी ग्रिन टिको सुरुवात प्राचिन चीनबाट भएको हो। ९ शताब्दी तिर चीनबाट यो चियाको चलन सम्राट सागाले लिएर आएका हुन्। उनिलेनै जापानमा यो चियाको खेति गरेर राज परिवारमा प्रयोग गर्न लगाएका हुन्। यो चिया क्योतोमा रहेको उजी भन्ने ठाउमा लगाईन्छ । धेरै पछि मात्र यो चियालाई पाउडर बनाउने टेक्निक प्रयोगमा आएको हो। यो पाउडरलाई माच्या भनिन्छ। करिब ५० बर्षमा माच्याको उद्धोगले उजीमा पुरानो पातवाला चियालाई पूर्ण रुपमा बदल्दिएको छ। अहिले पातवाला चिया शिजोउकामा ब्याप्त छ।
इण्डियन टि जुन क्यामेलिया असामिका नामक बिरुवाबाट आउछ भने जापनी र चिनीया टि क्यामेलिया सिनेंसिस नामक बिरुवा बाट बनाईन्छ। बिरुवा एउतै भएपनि जापानी र चिनी चिया बनाउने तरिका निकै फरक छ। चिनीया हरु आफ्नो टि-लिफ धेरै जसो रोस्ट गर्छन भने jजापानीहरु आफ्नो टि-लिफलाई स्टिम गरेर, सुकाएर प्रयोग गर्छन। यसले गर्दा जापानी टि फेर्मेंट नहुने हुनाले अक्सिडाईज हुन पाउदैन। त्यसैले जापानी टिमा टि-लिफको स्वाद बढी आउदछ।
माच्या पनि यहि टि-लिफ बाट बनाईन्छ। तर पातवाल चिया भन्दा अलग यसलाई पाउडर बनाईन्छ। जापानी टि मिठो मात्र नभई स्वास्थको लागि पनि निकै फाईदाजनक हुन्छ। जापानी ग्रिन टिमा एन्टी अक्सीड्याण्ट हुने भएकोले यसले कोलेस्ट्रोल घटाउछ। यसले मुटुको रोग र स्ट्रेस पनि कम गर्छ। ग्रिन टिले निकै रील्याक्स अनुभब गराउछ। यो अनुभूति ग्रिन टिले दिमागमा एल-थेअनाईन नामक रसायन पैदा गर्ने भएर हुने हो। ग्रिन टि मध्य माच्यामा सबै भन्दा बढी पौस्टिक तत्व हुने गर्दछ किनकि यसमा चियाको पुरै पात पाऊडर बनाउन प्रयोग गरिन्छ। माच्या बाहेकका अन्य चिया के के हुन् त ?
सेनच्या– यो चिया पनि जापानमा प्रशिद्द छ। यसमा भर्खरका पालुवाहरु प्रयोग गरिन्छ।
ग्योकुरो – यो चिया पनि जापानमा प्रशिद्द छ। यसमा भर्खरका पालुवाहरु प्रयोग गरिन्छ। – यसमा निकै उछ गुणस्तरको पात प्रोग गरिन्छ। यसको स्वाद अरु चिया भन्दा अलि फरक खालको हुन्छ । यो चियामा भिन्नै गुलियो र तितोपना पाईन्छ।
होउजिच्या – यो चियाको पात रोस्ट गरिएको हुन्छ। यसको खैरो रंग हुन्छ र क्यारामेलको जस्तो स्वाद हुन्छ।
गेनमाईच्या – यो चाहि सेनच्या र हल्का टोस्ट गरिएको ब्राउन राइसबाट बनाईएको हुन्छ। यो मन्दिरको पुजारीहरुले पहिले पहिले ब्रत बस्दा पर्योग गर्दा थे। यसमा स्टार्च हुने र हल्का पहेलो रंगको हुन्छ।
शिन्च्या – यसलाई इचिबान च्या पनि भनिन्छ. यो सेनच्याको पहिलो फलाई हो। यो चिया सबै भन्दा महँगो पनि हुन्छ। यसमा अनेक पौस्टिक तत्व हुने भएकोले यो चियामा हलुका गुलियो स्वाद पाईन्छ।
हजुरलाई नेपाली र इण्डीयन टि मनपर्छ भने हजुरलाई होउजिच्या मन पर्न सक्छ। कफी मनपराउने हरुले गेनमाईच्या वा अलि गाढा होउजिच्या मन पराउनु हुनेछ। सेनच्याको स्वाद अलि हलुका हुने भएकोले सुशी वा स्याण्ड्विच संग खान राम्रो हुन्छ। प्रिमियम टेस्टको लागि माच्या वा ग्योकुरो लिनुहोस्। अनि पैसावाला हुनु हुन्छ भने इचिबान शिनच्या पिउनुहोस्। यति धेरै थरिका चिया हुने भएता पनि यसको उत्पतिको संज्ञा दुई ठाउँलाई जदछ। ति ठाउँ हुन् क्योतो र शिजोउका। यी दुवै ठाउ आ-आफ्नो चिया बनाउने शैली र कौशलताको लागि चिनिन्छ।
उजी – संस्कृतिको भुमि
माच्या, टि सेरेमोनी र संस्कृति, यो धेरै मानिसको दिमागमा जापानी ग्रिन टि भनेपछि आउदछ। माच्याको बनाउने बिधि निकै जटिल छ। माच्यामा करिब ३० प्रकारको ग्रिन टिको मिश्रण हुन्छ। माच्याको स्वाद एउटा मिठो र राम्रो वाईन जस्तै जटिल हुने बताईन्छ। माच्याको खेति गरिने ठाउँ भनेको तोगानो भन्ने पहाड हो जुनले क्योतो र उजीलाई घेर्दछ।
१३औ शताब्दी देखि उजी चियाको लागि एतिहाशिक ठाउनै बनेको छ। अहिलेको चिया बनाउने कम्पनिहरु जस्तै होरी शिचिमेइएनले अहिले पनि मुरोमाची युगदेखि बनाउदै आएको चिया बनाउछ। पहिले थुप्रै प्रकारको चिया खेति गरिएता पनि, उजिमा पछि माच्याको मात्र खेति गर्न थालिएको हो। यसको कारण चाहि माच्या र जेन धर्म बीचको फ्युजनलाई मानिन्छ. जेन धर्मकोहरु उजीमा रहेको मोनास्ट्रिज संग सम्बन्ध रहेको मानिन्छ. माच्याको लागि उत्कृस्ट माटो र निकै स्पेसिफिक प्रोसेसिङ्ग बिधि (ओउइशिता साईबाई) ले उजी माच्यालाई निकै लोकप्रिय बनाएको छ।
शिजोउका- नौलो र आधुनिक स्वाद
शिजोउकाको टिको ईतिहास भने फरक छ। माच्या खेति गरिने भएता पनि यो क्षेत्रका किशानले अरु नै ग्रिन टिमा आफ्नो कौशलता हासिल गरे। यहाँ बुद्ध धर्मको खासै प्रभाव नभएर यसो भएको मानिन्छ। अहिले शिजोउका जापानको सबै भन्दा धेरै चिया उत्पादन गर्ने ठाउँ हो। यहाँ जापनको ४०% चिया खेति गरिन्छ। त्यसमा पनि मकिनोहरा र शिमिजुले चिया उद्दोगमा आफ्नो वर्चस्व राखेका छन्।
शिजोउकाको ग्रिन टिको ईतिहास सन् १२४१ मा शोईचि कोकुशी नामक जोगीले चीन बाट बिउ लिई आएर रोपी सुरु गरेको मानिन्छ। तर ग्रिन टिको बिकास एदो युग बाट सुरु भएको हो। टोकियो बाट नजिक रहेकोले शिजोउकाको ग्रिन टिले राम्रो ब्यापार पाएको थियो। ग्रिन टि (ओ-च्या) को व्यापार सबै भन्दा फस्टाएको भने मेइजि युगमा हो यो बेला शिजोउकाको ग्रिन टि अन्य ठाउमा पनि एक्सपोर्ट गरिनथ्यो।
अहिले शिजोउकको ग्रिन टि मध्य ९५% सेनच्या हुने गर्दछ। यो धेरै उत्पादन हुने र हरेक मौसममा पनि फ़लाउन मिल्ने भएकोले सेनच्याले ठुलो भाग ओगटेको हो।
आशा गर्दछौ हजुरले जापानीहरुको निकै लोकप्रिय ग्रिन टिको पर्याप्त जानकारी पाउनु भयो होला। यी दुई प्रकारको चिया (माच्या र ओ-च्या)को कथा निकै रोचक छैन त?